Sergei Lukyanenko: yakanakisisa mabhuku
Arts uye Entertainment, Mabhuku
The yakanakisisa renyaya munyori kuRussia, ari maonero mamiriyoni vaverengi. Vashoma angaenzaniswa naye mumarudzi ake, uye kana vanogona Somuenzaniso, imwe Victor Pelevin uye Vladimir Vasilyev, hazvina kuderedza makodzero kwayo. Asi, zviri kuti pane vakaenzana rimwe danho, pane kukwikwidzana mumwe.
Munyori, uyo anonyora kuti vana vakura uye nokusetsa pamusoro vakuru. The musiki "Watch" uye iconic "Deeptown". Zvose izvi Sergei Lukyanenko. Book munyori kutsvaira kure echiShinto, kunyange nhasi, apo vakawanda vanosarudza yemagetsi shanduro vaunofarira zvigadzirwa. Uye Fans arambe itsva zvinogadzirwa goho neMunyori, kungoziva kuti ibhuku akakodzera kuteererwa.
Sei zvakanaka kuti Russia yakanga iri imwe chiremba wepfungwa shoma, uye mumwe munyori zvakawanda. Sergey Lukyanenko akadzidza kuchikoro zvokurapa muguta Almaty nokuda chiremba. Gare gare, akanga specialized ari chiremba wepfungwa. Asi sezvineiwo, mumwe gore pashure pakudzidza akatanga kushanda sezvo Mutevedzeri mukuru mupepeti yomunharaunda magazini ose yokunyepera. Sezvo munyori Sergey Lukyanenko kwakaitika muna 1988, apo magazini akazviratidza ake nyaya "kutyora". Sezvo 1997 kupirinda zvose mabasa emunyori,. Kunyange zvazvo pane mashoko kuti chikamu mangwanani mabasa havasati dzakabudiswa
Sergey Lukyaneko akaroora, iye anogara Moscow nomudzimai wake nevana vatatu - Ekaterina, Daniel uye Hope. Anoramba dzinovaraidza - nomwe Yorkshire Terriers.
Munyori pagore chikamu mitambo, congresses uye Misangano vakazvipira renyaya, uye pamwe enviable kakawanda ndiko Kumukundi kuti mibayiro siyana.
Kupa vaverengi Sergei Lukyanenko? Books wava kugadzirwa dzinotevedzana - nayo chinokurudzira zvakare uye zvakare kutenga zvinhu zvitsva kuti avo kufarira vatambi. Asi munyori, mukusiyana kune dzimwe vanyori zhinji, haaiti dzino guru - kazhinji rimwe nyaya ikashandiswa kubva 2 kusvika 4 mabhuku. Kunze - "Cherechedza", vane 11, asi pane basa rakawanda mu kubatirapamwe. Writer unogona kukangamwira ichi zvishoma digression, sezvo mabhuku ake ose mabasa unoparadzanisa apera. Kunyange kana zviri chinotevera mubhuku zviitiko kutanga pamwe anawo nzvimbo yavakanga akagura yapfuura mumwe, ichiri okupedzisira aiva musoro nokuguma nomwe-kwakabatana pebindu shinda, uye kwete ine chigutsa mukanyiwa pakati hondo yakakura.
Sergey Lukyanenko akasika chaizvo yakasiyana series, asi zvakanaka pakati pavo vanonzi "Watch" uye "Labyrinth kuti Reflections". Asi vanoda kuti ingano zvakanaka vanoziva nevamwe: "Basa iri zvatinokanganisa," "Trix", "Genome", "The Chitsuwa Russia", "raiders dzedenga", "Stars - matoyi inotonhorera", "Ishe Nyika," "Dream Line ".
The yakanakisisa Mabasa Sergeya Lukyanenko
Sergey Lukyanenko akanyora enganonyorwa uye anosarudza akawanda, uyewo dzakawanda pfupi nyaya uye novellas. Tikaudza vaya vanoyeuka vaverengi:
"YOKOHAMA" - ane bhuku zvinoshamisa pamusoro rwendo kuburikidza nyika dzakasiyana. Seven mavara, vanomwe mapuraneti uye nomwe shanduro musikana chete, uye mumwe nomumwe uchafira pamberi huru hunhu. Asi zvichida achine nguva ...
"Hapana Time hwamakava" - Nyanzvi mune pamwe chete Nick Perumov zimbabwe zvisingaitiki. Ndinoda kuratidza bhuku iyi graphomaniacs zvose vanoedza kunyora chinhu pamusoro "popadantsev".
"Musango, apo Zvichakadaro muvengi ..." - nyaya iyi yaigona kuudza munhu anecdote, dai Usachema kudaro.
"" L "- zvinoreva vanhu" - chete kuverenga zvose.
Iri bhuku rangu kufarira, asi Lukyaneko anogona kuverenga zvose.
Ingangova yakatorwa "Watch" anozivikanwa vose: muna 2004, fu kunze "Night Watch", uye muna 2006 - "Day Watch". Both mafirimu vakatora Vaeriy Bekmambetov, uye mativi vakabudirira. About imwe firimu kwadzakabva, vashoma ndanzwa, tiri kutaura pamusoro firimu "Nun Aziris" vagari yemudzimu Yuliya Burkina uye Sergey Lukyanenko "Nhasi, mai vangu." Izvi setsa vana zvokungofungidzira pamusoro adventures vaviri hama munguva yemberi iri kure, uye kuti akaedza recreate Oleg nekambasi chidzitiro. Zvakazoonekwa kwete kuti zvakaipa, makore 30-40 apfuura, kwakadaro firimu yaizova nokurova harikunguruswi. Asi nokuti ano Fafitera rweruzhinji matepi havasi mhindu, sezvo havasi dzinodhura inokosha migumisiro uye nzvimbo dzokuona.
Sergey Lukyaneko anoshuma uye zvimwe zvinoita firimu adaptations, asi ivo vari pasi kunyange zvivako uye pfungwa. Iri idambudziko zvinowanzovapo vanyori zvose renyaya: kuitira kuti chigadzirwa nenzira itsva nzira kuridzwa cinema format, vanoda mari zvakakomba. Izvi haisi revakadzi yokufungidzira, izvo zvose zvinogona kubviswa muna rimwe kicheni uye mubhedhuru, uye kwete chaiwo mutikitivha nyaya, nokuti izvo ndimi mutana neimba uye vatambi zvakanaka. In ingano vanowana zvinowanikwawo kukura, nani.
Lukyanenko Sergey: inofambiswa kubva kuvaverengi pamusoro basa munyori
Dzimwe nguva zvakaoma kudavira kuti mabhuku ose aya akanyorwa nomumwe munhu. Mubvunzo hausi kusvika sezvaakaita Dari Dontsovoy, asi hunhu basa pacharo. Style dzose enganonyorwa uye nyaya dzakafanana, zvakafanana zvakanaka zvakanyorwa, asi mabhuku kukonzera manzwiro akasiyana chaizvo. Somuenzaniso, kana uchiyeuka "Autumn kushanyirwa", mundangariro ruchitedzemuka matsi tariro uye vamwe mwoyo muupenyu.
Asi mumwe achangobuda mabhuku - "Gumi Thumbs" anounza akasiyana chaizvo anzwe. Mumwe anowana pfungwa kuti kunyora zviri kwazvo-kuverenga uye anofara jaya nezveganda rake achiseka akaedza kupa inoshanda chaizvo nzira kuupenyu kuti Musakuvadza kunyange upenyu hwaAbhigairi hwaizova gamba. Kubva nyaya "Train mu inodziya Edge" Ndinoda kuchema, achitarisira kuti hauzombofi kutora sepokutangira firimu kwadzakabva.
Zvichida ichi ndicho musiyano pakati unyanzvi munyori kubva nyore mhizha - kumutsa hasha pamwe zvisikwa zvavo.
Asi panguva imwe chete ari mubhengi pane munyori uye chaiwo kufungidzira pamwe vatambi, uye nzvimbo renyaya, uye pakurwa rakapotsa chokwadi.
Mumwe, zvichida, kufanana hachisi zvose kuti pfungwa munyori vaverengi. Asi zvinoratidzika kuti maronda yakadaro nani zvikuru pane kushandisa rimwe hunhu mu yaive series, pane unotadza, vanyori vakawanda panguva.
The chigadzirwa (pfupiso) Sholokhov kuti "Ropa Vamwe" - rondedzero pamusoro rudo rwevabereki
Antique mabhuku. Nhoroondo kukura. Vamiririri yaitonga akare
Mabhuku Modern. Books wevanyori wepanguva
Psychology mumabhuku - mabhuku ... zvepfungwa: tsananguro uye mienzaniso
Famusovskogo vanhu uye Chatsky. Famusovskogo vanhu: unhu
". Chevengur: pfupiso" Chevengur "- imwe itsva ne munyori Russian Andrei Platonov
Environment uye utano hwevanhu - maviri kuvapo chinhu
Chinoramba chichingorerutsa mitemo - chinobatsira mudziyo
Medical audiologist. Ndianiko uyu?
Hope kemikari - Melatonin. How kuvandudza padanho Melatonin?
Wenyika - munhu basa kuti zvakanaka
Sei Conjugate rechiito mutauro French?
Hondo yevagari Tajikistan (Makore 1992-1997): tsananguro, nhoroondo uye migumisiro
The kumanikidzwa ari kudziyisa mugadziriro. Kushanda kumanikidzwa vari kudziyisa mugadziriro
Aerosol adhesive: tsanangudzo, mirayiridzo yekushandiswa
Chii katsap uye Moskal
Apple Tree "shtreyfling": tsanangudzo mukuru inobereka mhando
Cretinism - nayo .. Zviratidzo, kurapwa, dziviriro uye kuongorora chirwere